ဟူနန်ပြည်နယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
the unrelated province of ဟဲနန် နှင့် မရောထွေးပါနှင့်။
ကိုဩဒိနိတ်: 27°24′N 111°48′E﻿ / ﻿27.4°N 111.8°E﻿ / 27.4; 111.8 တမ်းပလိတ်:Infobox PRC province
ဟူနန် (ကူညီ·ချက်လက်) (တရုတ်: 湖南; ပင်ရင်: Húnán)သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတောင်ဖက်ရှိ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တောင်ဘက်တွင်ယန်ဇီမြစ်အလယ်ပိုင်း ၊ သုန်းထင်းကန်တောင်ပိုင်းတို့နှင့်ထိစပ်နေသောကြောင့် ဟူနန် (ကန်၏တောက်ဘက်) ဟု ခေါ်တွင်ခြင်းဖြစ်သည်။. ပြည်နယ်ကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားသော ရှန်းမြစ်ကို အစွဲပြု၍ ဟူနန်ပြည်နယ်ကို အတိုကောက် ရှန်း "湘" (pinyin: Xiāng) ဟုလည်း ခေါ်သည်။
ဟူနန်ပြည်နယ်သည် မြောက်ဖက်တွင် ဟူပေ၊ အရှေ့ဖက်တွင် ကျင်းရှီး၊ တောင်ဖက်တွင် ကွမ်တုံ၊ အနောက်တောင်ဖက်တွင် ကွေ့ကျိုး၊ အနောက်မြောက်ဖက်တွင် ချုံချင်းပြည်နယ်များနှင့်ထိစပ်နေသည်။ မြို့တော်မှာ ချန်ဆားမြို့ဖြစ်သည်။
၅.၁ Economic and technological development zones
ဟူနန်နှင့်ဟူပေသည် ချင်မင်းဆက်လက်ထက်တိုင်အောင် ဟူကွမ်ပြည်နယ်(湖廣)တွင်ပါဝင်သည်။ ၁၆၆၄ခုနှစ်တွင် ဟူနန်ပြည်နယ်ကိုဖွဲ့စည်းပြီး ဟူကွမ်ပြည်နယ်မှခွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ၁၇၂၃ တွင်လက်ရှိအမည်ကိုရရှိခဲ့သည်။
Hunan became an important communications center due to its position on the Yangzi River (Changjiang). It was also on the Imperial Highway constructed between northern and southern China. The land produced grain so abundantly that it fed many parts of China with its surpluses. The population continued to climb until, by the nineteenth century, Hunan became overcrowded and prone to peasant uprisings. Some of the uprisings were caused by ethnic tensions like ten-years long Miao people rebellion of 1795-1806.
ထိုက်ဖျင်အရေးတော်ပုံသည် တောင်ဖက်ရှိ ကွမ်ရှီးပြည်နယ်တွင် ၁၈၅၀ ၌ စတင်ခဲ့ပြီး ဟူနန်ပြည်နယ်သို့ကူးစက်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက်ယန်စီမြစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့သည်။ Ultimately, it wasaHunanese army under Zeng Guofan who marched into Nanjing to put down the uprising in 1864.
မော်စီတုံးမွေးရာဇာတိပြည်နယ်အဖြစ် ဟူနနန်ပြည်နယ်သည် ၁၉၆၆-၁၉၇၆ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးတွင်ထောက်ခံခဲ့သည်။ However it was slower than most provinces in adopting the reforms implemented by Deng Xiaoping in the years that followed Mao's death in 1976.
ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ကျူရုံကျိ၊ သမ္မတဟောင်း လျှိုလျှောက်ချီ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဖုန်တယ်ဟွေးတို့သည် ဟူနန်နယ်သားများဖြစ်ကြသည်။
Hunan is located on the south bank of the Yangtze River, about half way along its length, situated between 108° 47'-114° 16' east longitude and 24° 37'-30° 08' north latitude. It covers an area of ၂၁၁,၈၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၈၁,၈၀၀ စတုရန်းမိုင်), making it the 10th largest provincial-level division. The east, south and west sides of the province are surrounded by mountains and hills, such as the Wuling Mountains to the northwest, the Xuefeng Mountains to the west, the Nanling Mountains to the south, and the Luoxiao Mountains to the east. The mountains and hills occupy more than 80% of the area and plains comprises less than 20% of the whole province.
The Xiang, the Zi, the Yuan and the Lishui Rivers converge on the Yangtze River at Lake Dongting in the north of Hunan. The center and northern parts are somewhat low andaU-shaped basin, open in the north and with Lake Dongting as its center. Most of Hunan Province lies in the basins of four major tributaries of the Yangtze River.
တုန့်ထင်အိုင်သည် ပြည်နယ်အတွင်းအကြီးဆုံးအိုင်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးရေချိုအိုင်ကြီးဖြစ်သည်။ Due to the reclamation of land for agriculture, Lake Dongting has been subdivided into many smaller lakes, though there is nowatrend to reverse some of the reclamation, which had damaged wetland habitats surrounding the lake.
Hunan's climate is subtropical, and, under the Köppen climate classification, is classified as being humid subtropical (Köppen Cfa), with short, cool, damp winters, very hot and humid summers, and plenty of rainfall. January temperatures average ၃ to ၈ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၃၇ to ၄၆ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) while July temperatures average around ၂၇ to ၃၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၈၁ to ၈၆ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်). Average annual precipitation is ၁,၂၀၀ to ၁,၇၀၀ မီလီမီတာ (၄၇ to ၆၇ လက်မ).
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - List of administrative divisions of Hunan
Hunan is divided into 14 prefecture-level divisions, of which 13 are prefecture-level cities and the remaining division an autonomous prefecture. The prefecture-level cities are:
1 Changsha Tianxin District 长沙市
Chángshā Shì 7,044,118
2 Changde Wuling District 常德市
Chángdé Shì 5,747,218
3 Chenzhou Beihu District 郴州市
Chénzhōu Shì 4,581,778
4 Hengyang Yanfeng District 衡阳市
Héngyáng Shì 7,141,462
5 Huaihua Hecheng District 怀化市
Huáihuà Shì 4,741,948
6 Loudi Louxing District 娄底市
Lóudǐ Shì 3,785,627
7 Shaoyang Shuangqing District 邵阳市
Shàoyáng Shì 7,071,826
8 Xiangtan Yuetang District 湘潭市
Xiāngtán Shì 2,748,552
9 Yiyang Heshan District 益阳市
Yìyáng Shì 4,313,084
10 Yongzhou Lengshuitan District 永州市
Yǒngzhōu Shì 5,180,235
11 Yueyang Yueyanglou District 岳阳市
Yuèyáng Shì 5,477,911
12 Zhangjiajie Yongding District 张家界市
Zhāngjiājiè Shì 1,476,521
13 Zhuzhou Tianyuan District 株洲市
Zhūzhōu Shì 3,855,609
Xiāngxī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu 2,547,833
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါးများ - Politics of Hunan နှင့် List of provincial leaders of the People's Republic of China
ဟူနန်ပြည်နယ်၏ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံမှာ စပါးနှင့်ဝါဂွမ်းဖြစ်သည်။ တုန့်ထင်အိုင်ပတ်ဝန်းကျင်သည် Hunan's traditional crops are rice and cotton. The Lake Dongting area is an important center of ramie production, and Hunan is also an important center of tea cultivation. Aside from agricultural products, in recent years Hunan has grown to become an important center for steel, machinary and electronics production, especially as China's manufacturing sector moves away from coastal provinces such as Guangdong and Zhejiang.
Economic and technological development zonesပြင်ဆင်
၂၀၀၀ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟူနန်ပြည်နယ်၏လူဦးရေသည် ၆၄,၄၀၀,၇၀၀ ဦးရှိပြီး တိုင်းရင်းသား၄၁မျိုးနေထိုင်ကြသည်။ ၁၉၉၀ နှစ်များနှင့်ယှဉ်ပါက ၆.၁၇%(၃,၇၄၂,၇၀၀ဦး)တိုးတက်လာသည်။ ယင်းအနက်မှ ၈၉.၇၉%(၅၇,၅၄၀,၀၀၀ဦး)မှာ ဟန်(တရုတ်)လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ၁၀.၂၁%(၆,၅၇၅,၃၀၀ဦး) မှာလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြသည်။
↑ (တရုတ်) Origin of the Names of China's Provinces, People's Daily Online.
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 8 October 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟူနန်ပြည်နယ်&oldid=627048" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၀:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၀:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။